Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, ခရီးသွားနေရာများ
ဥရောပတစ်လွှားကိုဖြတ်သန်းသွားသောကျယ်ပြန့်သောတောင်တန်းတစ်ခုရှိသည်။ အဲလ်ပ်တောင်တန်းများ။ တောင်တန်းများသည်ခမ်းနားထည်ဝါလှပြီးအများစုမှာကျော်ကြားလှသည်။ ခရီးသွား dest ည့်နေရာများ၊ ပန်းချီကားများ၊
ဒီနေ့တွေ့ကြရအောင် အဲလ်ပ်တောင်တွေဘယ်လိုနေလဲ နှင့် ခရီးစဉ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငါတို့အဘို့ရှိပါတယ်။
အဲလ်ပ်တောင်တန်း သူတို့သည်ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ ကျော်ဖြတ်သန်း။ ၈ နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်သည် ဥရောပတိုက်မှအနောက်ဘက်မှအရှေ့သို့။ ကီလိုမီတာများစွာသည်အလွန်များပြားပုံရသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်တွင်၎င်းတို့သည်များပြားလှခြင်းမရှိဘဲ၊ မြောက်အာဖရိကရှိ Atlas တောင်တန်းများမှအာရှရှိဟိမဝန္တာအထိအာရှကိုဖြတ်ကျော်။ ဖြတ်သွားသောအဆက်မပြတ်သောကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုယူထားသည်။
အဲလ်ပ်တောင်တန်းများသည်မြောက်ဘက်မှသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ နစ်စ်အနီးရှိဂျီနီဗာရေကန်သို့စီးသွားပြီးအရှေ့မြောက်ဘက်မှဗီယင်နာသို့လှည့်ထွက်သွားကြသည်။ သူတို့သည်ဗီယင်နာဝုဒ်ရှိဒင်းညုကိုထိကာလွင်ပြင်သို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဘယ်နိုင်ငံတွေကအဲလ်ပ်တောင်ကိုဖြတ်ကြတာလဲ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ၊ သြစတြီးယား၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား၊။ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ သြစတြီးယားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများကိုသာအမှန်တကယ် alpine နိုင်ငံများအဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်.
အဲလ်ပ်တောင်တန်း ခန့် 207 တထောင်စတုရန်းကီလိုမီတာသိမ်းပိုက် နှင့်သံသယမရှိဘဲသူတို့တိုက်ကြီး၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုမျှမကလွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကအင်ဒီးစ်နှင့်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းများတူညီခဲ့သည့်တောင်တန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ ဥရောပသည် Eurocentric ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤတောင်များသည်တစ်ခါတစ်ရံအခြားတောင်များထက်လူကြိုက်များသည်။
အဲလ်ပ်တောင်တန်းများမှာရှိနှင့်နေဆဲဖြစ်သည် အများအပြားအမျိုးသားရေးစီးပွားရေး၏အင်ဂျင်။ အကယ်၍ ရာစုနှစ်များစွာကြာစီးပွါးရေးသည်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ခဲ့လျှင် ၁၉ ရာစု မှစ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများလွှမ်းမိုးသောတောင်တန်းများမှသံများ၊ သံဓာတ်၊ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောရေများ၊ အလူမီနီယမ်၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သံမဏိများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း, မီးခိုးခေါင်းတိုင်မပါဘဲစက်မှုလုပ်ငန်း။
သို့သော်အဲလ်ပ်တောင်၏မူလအစကားအဘယ်နည်း။ ဒီတောင်တန်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၅ မှ ၄၄ သန်းအကြားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, Mesozoic ကာလ၏အဆုံးမှာ။ ပထမပထဝီအနေအထားအရအချိန်နှင့်အမျှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲမြစ်သည် Alps ကိုအလွန်ပုံသဏ္shapedာန်ပြုသည်။ တောင်ထိပ်များ၊ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းသောချိုင့်များ၊ ရေတံခွန်များ၊ ရေကန်များ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Constance ရေကန်၊ Salzkammergut၊ Staubbach ရေတံခွန်၊ Matterhorn သို့မဟုတ် Grossglockner တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် \_ t အဲလ်ပ်တောင်တန်းများကိုအနောက်အဲလ်ပ်တောင်တန်းများ၊ ဗဟိုအဲလ်ပ်တောင်တန်းများနှင့်အရှေ့တောင်တန်းများအပိုင်းများခွဲခြားထားသည် ကွဲပြားခြားနားသောတောင်တန်းများနေသော။ အနောက်ဘက်တောင်တန်းများသည်ကမ်းရိုးတန်းမှမြောက်ဘက်တွင် စတင်၍ ပြင်သစ်အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်အီတလီအရှေ့မြောက်ဘက်ဂျီနီဗာရေကန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွန်ချိုင့်ဝှမ်းကိုဖြတ်ကျော်သည်။ ဤတွင်မြေထဲပင်လယ်နှင့်အနိမ့်အမြင့်၊ ပင်လယ်နက်ပိုင်းနှင့် Verdon Canyon (သို့) Mercantour Massif နှင့်အေးခဲနေသောတောင်တန်းများဖြစ်သည်။ Mont Blan အမြင့် ၄,၈၀၇ မီတာရှိပြီးတောင်တန်းများအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
အ ဗဟိုအဲလ်ပ်တောင်တန်း ၎င်းတို့သည် Mont Blanc အရှေ့ဘက်ရှိ St. Bernard Pass နှင့်ဆွစ် - အီတလီနယ်စပ်အထိ Como ရေကန်မြောက်ဘက်ရှိSplügen Pass အထိဒေသအထိဖြစ်သည်။ ဤနယ်မြေတွင်လူသိများသောတောင်တန်းများသည်အလွန်များပြားသည်။ Matterhorn, Finsteraarhorn, Weisshorn နှင့် Dufourspitzeအားလုံးမြင့်တက်။ ဖော့မြစ်ထဲသို့စီးဝင်သောမဂ်ဂရီနှင့်ကိုမိုမြစ်ရေခဲရေကန်များလည်းရှိသည်။
သူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက် အရှေ့ Alps ၄ င်းတို့သည်ဆွစ်ဇာလန်ရှိRätischeတောင်တန်း၊ ဂျာမနီနှင့်Austriaစတြီးယားအနောက်ပိုင်းရှိ Bavarian ရှိ Alps၊ အီတလီရှိအရှေ့မြောက်ပိုင်းနှင့်ဆလိုဗေးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှ Julian Alps, Austriaစတြီးယားရှိ Tauern တောင်တန်းများသို့မဟုတ်ဘော်လကန်ကျွန်းဆွယ်ရှိ Dinaric Alps တို့၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိမြစ်များမှာ Mur၊ Drau၊ Sava၊ Salzach, Enns သို့မဟုတ် Garda Lake တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏ကယ်ဆယ်ရေးသည်မမျှတ အမြင့်ဆုံးတောင်သည်အနောက်ဘက်၊ Mont Blanc အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့် Finsteraahorn အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ Monte Rosa သို့မဟုတ် Weisshorn အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီတွင်အမြင့်ဆုံးတောင်တန်းရှိသည်။ ဥပမာ? ကောင်းပြီ၊ သြစတြီးယားမှာ Grossglockner၊ ဂျာမနီမှာ Zugspitze၊ ဆလိုဗေးနီးယားမှာ Triglav ပါ။
ဒါပေမဲ့ အဲလ်ပ်တောင်တန်းများ၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသည်မမျှတသော်လည်းရာသီဥတုလည်းပါသည်။ အမြင့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်တောင်တန်းများကြားတွင်သာမကတူညီသောတောင်တန်းများတွင်ရှိသည်။ အဲလ်ပ်တောင်တန်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ထိခိုက်သည် ရာသီဥတုလွှမ်းမိုးမှုလေးရပ် အနောက်ဘက်မှအလယ်အလတ်စိုထိုင်းသောရာသီဥတု၊ မြောက်ဘက်မှ ပို၍ အေးသောပို polar ရာသီဥတု၊ အရှေ့ဘက်မှနွေရာသီပူသောနွေရာသီနှင့်တောင်ဘက်မှပူနွေးသောမြေထဲပင်လယ်လေထုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောခြောက်သွေ့။ အေးသောရာသီဥတုရှိသည်။
အခုဒီမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ခရီးသွားများအတွက်အဲလ်ပ်တောင်တန်းကဘာပေးသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကခရီးသွား growing ည့်သည်များတိုးများလာပြီးနိုင်ငံများကခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်သည်။ အဲလ်ပ်တောင်တန်းများတွင်လှည့်ပတ်နေသည် နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ၆၀၀ နှင့် ၂၇၀ သည်သြစတြီးယားနိုင်ငံတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်။ တောင်သည်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းနွေရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည့်နေရာများစွာရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
ကံကောင်းတာက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများအတိတ်၌ရှိကြ၏။ ရိုးရာတောင်တန်းများသို့လမ်းကြောင်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၊ မီးရထားလမ်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဒီနေရာမှာမရနိုင်တဲ့ alpine destination မရှိဘူး။
အဲလ်ပ်တောင်ကိုဘယ်မှာသွားရမလဲ။ En Alemania များစွာသောချစ်စရာကောင်းသည့်နေရာများသည် Bavarian Alps တွင်ရှိသည်။ နှင်းလျှောစီးရာသီသည်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှAprilပြီလအထိဖြစ်ပြီးမေလကုန်မှနိုဝင်ဘာလအကြားနွေရာသီဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိအကြီးဆုံးအပန်းဖြေစခန်းများမှာ Garmisch-Partenkirchenပုံမှန်အားဖြင့်ဘားရားဝါးအနားယူသော်လည်းသင်သည် Oberstdorf, Füssenနှင့် Berchtesgaden သို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကားတစ်စီးငှားလျှင်အကောင်းဆုံးသော alpine လမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဂျာမန် Alpine လမ်းကြောင်းသည်ကီလိုမီတာ ၄၅၀ အကွာရှိ Constance Lake ရှိ Lindau မှSchönauသို့သွားသည်။ အတွက်အဲလ်ပ်တောင်တန်း သြစတြီးယား သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဒူဘိုင်းချိုင့်ဝှမ်းနှင့် Pannonian လွင်ပြင်၏လှပသောရှုခင်းများအပြင်ပို့ကဒ်များမှယူထားသောမြို့များ၊ ဆလိုဗေးနီးယားရှိအဲလ်ပ်တောင်တန်းနှင့်မြေထဲပင်လယ်သည်တူညီသောပန်နွန်နီလွင်ပြင်ကိုတွေ့နိုင်ပြီးဂူများ၊ သစ်တောများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ ရေတံခွန်များနှင့်ရေကန်များ၊
En ပြင်သစ် အဲလ်ပ်တောင်တန်းများသည်လှပသောရှုခင်းများကိုကျေးရွာများနှင့်ရဲတိုက်များဖြင့်ဖန်တီးကြသည် italia အံ့ဖွယ်အမှုများလည်းဖြစ်ပျက်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အစတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့၊ ၁၀၀% နီးပါးလောက်သော alpine ရှုခင်းများကိုသာသင်လိုချင်သည်ဆိုပါက ... သင်၏ ဦး တည်ရာသည် ဆွစ်ဇာလန်!
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အိပ်မက်ဆိုးမက်နေသောတောင်များ၊ cogwheel ရထားများ၊ ကေဘယ်လ်ကားများ၊ မြင်ကွင်းကျယ်မျှော်စင်များနှင့်အတူနှင်းလျှောစီးတောင်ထိပ်များ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်အဆင်ပြေသောအပန်းဖြေစခန်းများ၊ နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာအတူတကွရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဥရောပခရီးစဉ်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ပါတယ် ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသို့မဟုတ်နွေရာသီအတွက်အဲလ်ပ်တောင်တန်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » အဲလ်ပ်တောင်တန်း
အဘယ်အရာကိုတစ်နေ့အတွက် Segovia တွင်ကြည့်ရှုရန်